चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।
भर्खर सम्पन्न उपचुनावबारे विभिन्न कोणबाट विभिन्न खाले टिप्पणी आइरहेका छन् । चुनावमा भाग लिएका दलको पनि समीक्षा बैठक जारी रहेको समाचार पढ्न पाइँदैछ ।
यी समीक्षा प्रायःजसो दलीय कर्मकाण्डभन्दा बढी हुने गरेको बिरलै पाइन्छ । ७ वटा प्रदेश रहेको देशमा क्षेत्रीय पार्टीको सम्भावना देख्नेको पनि कमी छैन । यद्यपि पुराना दलले अहिले पनि राष्ट्रिय चश्मा (काठमाडौं केन्द्रित) लगाएर चुनावको समीक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ । जबकि आवश्यकता भनेको भूइँ सतहमा पार्टीको धरातलबारे गहन समीक्षाको हो ।
वडाध्यक्ष, अध्यक्ष वा मेयर जस्ता पदका चुनाव अहिलेको सन्दर्भमा सांसद र विधायकभन्दा अधिक महत्त्व राख्ने किल्लाको रुपमा लिनु आवश्यक छ । त्यसमा पनि कुनै दल यदि आफ्नो उर्वर जमिनमा खडेरीको सामना गर्छ भने त्यस्ता दलले त झन् कर्मकाण्डी समीक्षाभन्दा पनि तत्कालीन उर्वर रहेको जमिनको माटो परीक्षण नै गराउनुपर्छ जस्तो भान हुन्छ । खेतालाको कमजोरीभन्दा पनि खेतालाको नियतमाथि पनि प्रश्न चिह्न उठाउन सक्नुपर्छ ।
विभिन्न ५२ सीटमा भएको उपचुनावमा कुन दलले कति ठाउँमा आफ्नो झण्डा गाड्न सफल भयोभन्दा पनि आफ्नो कब्जा क्षेत्रबाट झण्डा कसरी उडेर गयो त भन्ने कुरा गम्भीर हो जस्तो लाग्छ । झण्डाका रक्षक नै भक्षक त भएनन् ? चर्चामा छ – महोत्तरीको मठिहानी गाउँपालिका–६ । जहाँ कांग्रेसले २४ अर्थात् २ दर्जन मत प्राप्त गरेको छ । कांग्रेसको किल्लाको रुपमा रहँदै आएको पिपरमा पनि कांग्रेसको लाचारीपन देखिएको छ ।
नेपालमा राणाविरुद्ध आन्दोलनदेखि लिएर पञ्चायतविरुद्ध लडाइँमा महोत्तरीको पिपरको आफ्नै योगदान रहेको इतिहास छ । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि शंखनाद गरेको आन्दोलनमा बीपीको कोइरालाको चर्चा जति गरेपनि पिपराका रामनारायण मिश्र बीपीभन्दा कम क्रान्तिकारी थिएनन् । कांग्रेसको आधार क्षेत्र मधेश रहेको इतिहासबारे कोही अबुझ होला जस्तो लाग्दैन तर आधार प्रदानकर्ता रामनारायण मिश्रहरू थिए भन्ने जानकारी पनि हुनुपर्ने हो आमजनमा ।
कुनै बेला पिपरा र कांग्रेस पर्यायवाची शब्द नै हुने गर्थे तर वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले पिपरमा समेत आफ्नो आधार भूमि गुमाएको छ । रामनारायण मिश्रका छोरा हरिशंकर मिश्र एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएपनि कांग्रेस सांगठनिक हिसाबले कमजोर बन्दै गएको थियो ।
मठिहानीको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा मठिहानी गाउँपालिकामा शून्यप्रायः अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसको बिजोग छ । कुनै बेला मठिहानीमा जय नेपालको नारा लगाउनेको संख्या सर्वाधिक रहेको थियो भने आजकल सलाम र जय मधेशको नारा घन्किँदो छ । के कारणले भएको होला त यस्तो ? भनिन्छ कि नेपाली कांग्रेसमा सांगठनिक अन्तर्घात हुन्छ । केही हदसम्म यो सही पनि होला तर अन्तर्घात भनेको त भित्रिरुपमा कसैलाई गर्ने घातलाई बुझिन्छ ।
मठिहानीमा कांग्रेसका कर्ताधर्ताका रुपमा रहेका नेताले जब ‘खुलमखुल्ला’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि मत मागेर हिँडछ, खर्च गर्छ र भगवान्सँग नेकपाको विजयीको लागि आशिर्वाद माग्छ भने त्यसलाई अन्तर्घात भने कि ‘प्रस्टघात’ ? अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपा उम्मेदवारसँगै सदरमुकाम जलेश्वरमा समेत कांग्रेसका नेताले मत मागेर हिँडेको कसैबाट लुकेको छैन । महोत्तरी कांग्रेसमा दखल राख्ने मठिहानीका ती नेताले नेकपाको कार्यकर्ताझैं मत माग्दा पार्टीले त्यस्ता नेतालाई दण्डित गर्ने ल्याकत प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् ।
वडाको पछिल्लो उपचुनावमा नेकपामा कसलाई टिकट दिँदा प्रतिस्पर्धामा खडा उत्रन सक्छ र कांग्रेसबाट कसलाई टिकट दिँदा कांग्रेसको मत नेकपामा ‘स्वीप’ गराउन सकिन्छ भन्ने स्तरसम्मको क्रियाकलापको मञ्चन गरेका कांग्रेसी नेताको एकल मिसन रहेको छ, त्यो हो महोत्तरी ३ नम्बर क्षेत्रमा नेकपाको किल्ला गाड्ने तर नेपाली कांग्रेसको लाचारीपन देख्न लायक छ । महोत्तरी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलाई कांग्रेसको हारमा पनि मुनाफा भइरहेको हुन्छ । टिकट वितरणदेखि लिएर चुनावी रणनीतिसम्म उनी विरोधी होस् कि कांग्रेसी सबैलाई एकै नासको माया दिने गर्छन् । दाम जताबाट आयो, उसकै पक्षमा उभिने उनको चरित्रले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएपनि उनलाई मनग्य आर्जन गर्ने अवसर दिइरह्यो ।
महोत्तरी ३ नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांगेसको अवस्था रुन्चे बिमारी सरह भएको छ । झट्ट हेर्दा शरीर स्वस्थ देखिने तर भित्रिरुपमा बिमार जस्तो । संगठनको हिसाबले कांग्रेसको अवस्था राम्रो थियो (छ ?) तर अहंकारले भरेका आफूलाई कांग्रेसका पुराना नेताको उपमा दिएर आत्मरोमाञ्चित भइरहने नेताहरूका कारण कांग्रेस कमजोर भइरहेको छ ।
सधैभरि घरमा बसेर ब्ल्याक कफी खाने र चुनावको बेला सेतो लामो कुर्ताको भरमा राजनीति गर्ने हो भने मठिहानीमा मात्र होइन, क्षेत्रमै मत संख्या केही दर्जनमै सीमित हुँदै जाने सम्भावना अधिक छ । आउँदो चुनावमा कांग्रेसले प्रथम स्थानमा आउने भ्रममा बाँचिरहेका कांग्रेसजनलाई पछिल्लो उपचुनावले होशमा ल्याएको हुनुपर्छ । मधेश आधार क्षेत्र ठान्ने कांग्रेसीले समाजवादी पार्टी र राजपाको एकीकरण पश्चातको परिस्थितिलाई कसरी लिने हो ? उनै जानून् ।
महोत्तरी कांग्रेसले उपचुनावको समीक्षा गर्दा (गर्ने हो भने ?) पिपरा र मठिहानी गाउँपालिकामा सक्रिय सदस्यता बोकेका कथित कांग्रेसीको सदस्यता खारेज गरी नयाँ सिराबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन तर मठिहानीमा २ दर्जन मतका कारक नेताको हिसाबकिताब लिनुपर्छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बहस : ७ वर्षे हद नै त...
राष्ट्रियता, संविधान संशोधन र सरकार परिवर्तन
नेपाली नागरिकतामा भारतको जहिल्यै बक्रदृष्टि : यस्तो...
३८० म्यानपावर कम्पनी खारेज हुँदै
मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारको तयारी, छलफलमा जुटे व्यवसायी
उपत्यकामै २ सय ३९ संक्रमित, १० दिनमा तीन गुणा
प्रतिकूल मौसमले हराउँदै सलह
विवाद समाधानको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई
कोभिडविरुद्धको खोप बनाउने भारतीय घोषणा विवादित
हिजो दिनभर : नेकपामा अध्यक्षद्वयबीच सहमतिको प्रयास, स्थायी कमिटी बैठक तेस्रो पटक स्थगित
अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालयको चेतावनी